मान्यताको मिथक | Martech Zone
मान्यता को मिथ्या
सोमबार, फेब्रुअरी 15, 2016 Douglas Karr
स्लाइडहरू मध्ये एउटा जुन मैले व्यवसायसँग गरेको प्रत्येक कुराकानीमा चर्चा गर्दछ जुन एउटा हो जसलाई म कल गर्दछु एट्रिब्युशनको मिथक। कुनै मापन प्रणालीमा, हामी बुलियन र व्यवहारको असक्रिय नियमहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं। यदि यो, त्यसपछि त्यो। यद्यपि यो समस्या हो, किन कि खरीद निर्णयहरू कसरी गरिन्छ भन्ने छैन। केही फरक पर्दैन यदि तपाईं उपभोक्ता हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं एक व्यवसाय हुनुहुन्छ भने - यो वास्तविकता होईन ग्राहक यात्रा.
मामला मा मुद्दा मेरो एक को खरीद हो अमेजन इको। मैले पहिलो पटक सुरू गरेको बेला मैले बज अनलाईनलाई देखेँ, तर मलाई वास्तवमै यसको लागि आवश्यक थिएन। त्यस समयमा म पनि प्राइम प्रयोगकर्ता थिएन। तर मैले अधिक र अधिक व्यापारिक खरीदहरू अमेजनमा सारें, प्राइममा सामेल भए, र एक दिन भित्र शिपिंग प्राप्त गर्दा, मेरो अमेजनको दृष्टिकोण परिवर्तन भयो।
मलाई अझै यो बारेमा धेरै थाहा थिएन अमेजन इकोयद्यपि। एक दिन फेसबुक मा, मार्क स्चेफर एक रोचक टिप्पणी गर्नुभयो। उनले उल्लेख गरे कि उनी आफ्नो अमेजन इकोसँग कुरा गर्दै थिए जस्तो कि यो कोठामा एक व्यक्ति हो। टेक गीक र अमेजन दुवै उत्साहीको रूपमा, म उत्सुक थिए।
पहिलो टच एट्रिब्युशन
प्राविधिक रूपमा, मँ भन्छु कि त्यो वास्तवमै मेरो ग्राहकको यात्राको पहिलो स्पर्श थियो। म फेसबुक बाट अमेजन गए जहाँ मैले उत्पाद पृष्ठ पढें। यो एकदम राम्रो देखिन्थ्यो तर म वास्तवमै त्यस बिन्दुमा खर्चको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्दिन। मान्छेहरूले मार्केटिंग सामग्री बाहिरका केहि राम्रा चीजहरू गरिरहेका थिए कि भनेर हेर्न म पछि युट्यूबमा सरे।
म अमेजनमा फर्कें र १ तारे समीक्षामार्फत पढें र वास्तवमा केहि पनि देखेन जुन मलाई उपकरण खरीद गर्नबाट रोक्दछ… बाहिर वा मूल्य। मँ नयाँ खेलौनालाई त्यतिबेला न्याय गर्न सक्दिन
अन्तिम टच एट्रिब्युशन
अर्को हप्ता को लागि वा मैले वेब नेभिगेट गरे जस्तै, केहिका लागि पुन: मार्केटिंग विज्ञापन अमेजन इको निस्किनु। म अन्ततः विज्ञापन मध्ये एकको पासोमा गएँ र उपकरण खरीद गरें। मँ कत्ति माया गर्छु भन्ने बारेमा केहि अनुच्छेद लेख्छु, तर त्यो यस पोष्टको उद्देश्य होइन।
यस पोष्टको उद्देश्य छलफल गर्न जहाँ यो अमेजन इकोको बिक्रीलाई श्रेय दिईन्छ। यदि यो पहिलो स्पर्श हो भने, यो मार्कलाई प्रभावकारको रूपमा श्रेय दिइनेछ… यद्यपि उहाँ उपकरण र प्रविधिको लागि प्रभावकर्ता हुनुहुन्न। म भन्न चाहन्छु कि इकोको बारेमा मार्कको टिप्पणी मेरो ग्राहकको यात्रामा बढी जागरूकता कार्य थियो। जहाँ मार्कको टिप्पणी भन्दा पहिले मलाई इकोको परिष्कृतता र सुविधाहरूको विविधताको बारेमा सचेत थियो।
यदि एट्रिब्युसन मोडेल अन्तिम स्पर्श हो भने, सशुल्क विज्ञापन र पुनः मार्केटिंग बिक्रीको स्रोत हुनेछ। तर तिनीहरू वास्तवमै थिएनन्। यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ कि कुन मार्केटिंग रणनीतिले वास्तवमा मलाई इको किन्न प्रति विश्वस्त बनायो, म जवाफ दिनेछु:
मलाई थाहा छैन।
यो कुनै पनि थिएन एकल रणनीति त्यसले मलाई इको किन्न लगायो, ती सबै हुन्। यो मार्कको टिप्पणी थियो, यो प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पादित भिडियोहरूको लागि मेरो खोजी थियो, यो मेरो खराब समीक्षाको समीक्षा हो, र यो पुन: बजार विज्ञापनहरू थिए। यो Google एनालिटिक्सको रूपान्तरण फनेलमा कसरी फिट हुन्छ? यो छैन… सबै भन्दा ग्राहक यात्रा गर्दैन।
म बारेमा लेखेको छु इनबाउन्ड मार्केटिंगको प्रमुख गुनासो र एट्रिब्युसन कुञ्जी हो।
त्यहाँ एक वैकल्पिक छ तर यो धेरै जटिल छ। भविष्यवाणी विश्लेषण सबै माध्यम र रणनीतिहरु मा बिक्री को ब्यवहार गर्न सक्छ र तपाइँ समायोजन गर्न को लागी, यो समग्र बिक्री को लागी प्रासंगिक गतिविधि संगट गर्न शुरू गर्न सक्दछ। यी ईन्जिनहरूले तब कसरी पूर्वानुमान गर्न सक्छन् निश्चित मार्केटिंग रणनीतिमा बजेट वा गतिविधि कम गर्ने वा बढाउँदा समग्र तल्लो रेखालाई कसरी असर गर्ने छ।
जब तपाईं आफ्नो मार्केटिंग प्रयासहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यो आवश्यक छ कि तपाईंले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि मार्केटिंगमा पनि सीधा श्रेय रूपान्तरण छैन ग्राहकको निर्णय प्रक्रियामा समग्र प्रभाव छ। र प्रभाव हाम्रो मार्केटिंग प्रयासहरू भन्दा टाढा छ - एक सम्भाव्यताको सम्पूर्ण अनुभवले यात्रामा योगदान पुर्‍याउँछ।
यहाँ एक सरल उदाहरण छ: तपाईं एक स्टोर को मालिक र आफ्नो सफाई कर्मचारी काट। यो त्यस्तो होइन कि तपाईंको स्टोर फोहोर छ, तर हुनसक्छ यो पहिले जत्तिकै दाग नभएको छ। नतिजा यो छ कि तपाईको बिक्री खस्कन्छ र धेरै फिक्की शपर्सले त्यस्तो महसुस गर्दैनन् जस्तो कि यो अर्को छिमेकको स्टोर जत्तिकै सफा छ। तपाइँ तपाइँको मार्केटिंग प्रयासहरूमा कसरी यसको लागि खाता गर्नुहुन्छ? तपाईंले यस समयमा आफ्नो मार्केटिंग खर्च बढाउनु भएको हुन सक्छ तर समग्र बिक्री घटियो। तपाईंको मार्केटिंग बजेटमा कुनै "सुपर क्लीन" लाइन आईटम छैन ... तर तपाइँलाई थाहा छ कि यसले असर पार्दछ।
आज, कम्पनीहरूलाई सामग्रीको आधारभूत रेखा चाहिन्छ। सफा, उत्तरदायी वेब साइटबाट, चलिरहेको लेखहरूमा जुन उनीहरूको विश्वसनीयता बनाउँदछ, केसहरू, सेतो कागजातहरू, र इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्न। सबै सबै साझा छन्, र सामाजिक च्यानलहरू मार्फत थप गरियो। ती सबै खोजी ईन्जिनका लागि अनुकूलित छन्। ती सबै एक ईमेल न्यूजलेटरमा योगदान पुर्‍याउँछ जुन सम्भावनालाई पोषण गर्दछ।
यो सबै आलोचनात्मक छ - तपाईले अर्कोको लागि व्यापार गर्नुहुने त्यस्तो एक छैन। तपाईंले उनीहरूको प्रभाव देख्दै तिनीहरूलाई उचित रूपमा सन्तुलनमा राख्न चाहानुहुन्छ, तर पूर्ण अनलाइन मार्केटिंग उपस्थितिमा कुनै पनि वैकल्पिक हुँदैन।
सम्बन्धित Martech Zone लेख
टैग: Amazon echoविशेषणपहिलो स्पर्श एट्रिब्युशनइनबाउन्ड मार्केटिङअन्तिम स्पर्श एट्रिब्युशनमिथकएट्रिब्युशनको मिथकभविष्यवाणी एनालिटिक्सभविष्यवाणी एट्रिब्युसन
Douglas Karr Monday, February 15, 2016
अधिकतम नाफालाई एल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारण कसरी प्रयोग गर्ने
पुनः प्रिसिing गर्दै: अमेजनले पुन: प्रशोधन कसरी गर्छ र यसले कति लामो समय सम्म लिन्छ
सदस्यता लिनुहोस् Martech Zone समाचार पत्र
© प्रतिलिपि अधिकार 2022 DK New Media, सबै अधिकार सुरक्षित
हामी तपाइँको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं